‘Nahita ny vahaolana teo amin’ny fiainana aho’: lehilahy Armeniana mpanety volo manome torohevitra ho an’ireo zokiolona mpiray tanindrazana aminy · Global Voices teny Malagasy
Manasongadina ny halemen'ny lehilahy ny resadresaka tao amin'ny toeram-panetezam-bolon'i Tolik
Voadika ny 30 Jona 2019 18:59 GMT
Vakio amin'ny teny ਪੰਜਾਬੀ, বাংলা, नेपाली, Français, Italiano, Español, عربي, Ελληνικά, English
Tantara avy amin'ny Chai-Khana.org ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa. Avy amin'i Anzhela Frangyan sy Inna Mkhitaryan ny lahatsoratra sy ny lahatsary.
Ho an'ny lehilahy ihany ilay efitrano mirefy 15m². Any amin'ny faritra ambanivohitr'i Yerevan no misy ity toeram-panetezam-bolon-dehilahy amin'ny endrika Sovietika an'i Tolik ity, toerana iray hialan'ireo lehilahy sasatra: hitantarany ny tantarany, hiresahany ny ahiahiny – ary hanapahany ny volony. Lasa fialokalofan'ny lehilahy ilay toeram-panetezam-bolo, toerana iray hialana amin'ireo toerana fikolokoloana endrika amam-bika maoderina izay nanjary nalaza be tao an-drenivohitra.
Manan-kaja eo anatrehan'ny mpanjifany i Tolik, 67 taona izay maro amin'izy ireo no nahatoky azy nandritra ny 40 taona mahery tamin'ny fanapahany ny volon'izy ireo sy ny eritreriny. Ao amin'ny fiarahamonina hanjakan'ny lehilahy ao Armenia dia ity toeram-panetezam-bolon-dehilahy ity no iray amin'ireo toerana vitsy indrindra izay ahafahan'ny lehilahy miresaka ny fahalemen'izy ireo – anisan'izany ny ahiahiny mikasika ny volony sy ny bika aman'endriny – kanefa sady tsy manana ahiahy ny ho hita hoe efa reraka.